AA ခေါင်းဆောင်တွေကို အကြမ်းဖက် ဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးထိခိုက်နိုင်
ရက္ခိုင့်တပ်တော် စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်၊ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်နဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခ။
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်၊ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဒေါက်တာ ညိုထွန်းအောင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ဟန်နဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခိုင်သုခတို့ကို မြောက်ဦးမြို့နယ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးအောင်သူရက အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတာပါ။
သူတို့ကို တရားခံပြေးတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာ စွဲဆိုထားပြီး တရားရုံးကလည်း အမှုရဲ့ အဆင့်တစ်ခုမှာ တရားခံပြေးအဖြစ် ဆုံးဖြတ်ကြေညာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲတဲ့ မတ်လအတွင်းက မြောက်ဦးမြို့နယ် ချောင်းသစ်ကျေးရွာအနီးမှာ တပ်မတော်က ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ လူ ၁၃ ဦးအနက် ၁၂ ဦးကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ ရဲကတရားစွဲထားပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ရာဇဝတ်အထွေထွေအမှုအမှတ်-၂၈/၂၀၁၉ မှာ ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA)ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားခံပြေးတွေအဖြစ် စာရင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်၊ ပါတီရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ရှေ့နေဒေါ်အေးနုစိန်က အခုလိုဝေဖန်ပါတယ်။
“ဒီလိုအယူအဆမတူကြလို့ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ တော်လှန် ပုန်ကန်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုမှ သာမန်လူတွေကို တရားစွဲတဲ့ အခါမှာ ထည့်သွင်းပြီးတော့ တရားစွဲဖို့ လိုအပ်သေးလို့လား။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဥပဒေအမြင်၊ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ရဲ့အမြင်က ဒါဟာ AA ဆိုတဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို သေးသိမ်သွားအောင် လုပ်လိုက်ရာရောက် တယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ဒီအစိုးရက တစာစာပြောနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းဟာ တကယ့်ကို ပျောက်ပျက်သွား လိမ့်မယ်။ မှုန်ဝါးတဲ့အဆင့်ကို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူက လာတော့မှာတုန်း။ ကိုယ့်ကိုတရားခံအဖြစ် စွဲထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို”
အောက်ခြေကအမှုတစ်ခုမှာ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းပြီး တရားစွဲဆိုတာဟာ တရားဥပဒေနဲ့ အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေအပေါ်မှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အထင်အမြင်သေးတာတွေ၊ မယုံကြည်မှုတွေ၊ မုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့် မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ရှေ့နေဒေါ်အေးနုစိန် ကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးကတော့ အခုလိုတရားခံပြေးအဖြစ်စွဲဆိုတာဟာ AA အဖွဲ့အပေါ် ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလို့မြင်ပြီး မြန်မာပြည်ထဲမှာ AA အဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ ပိုပြီးခက်ခဲသွားနိုင်တယ် လို့ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ချင်လွန်းလို့ ထင်ပါတယ်
"တစ်ဖက်သတ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AA အဖွဲ့ကို အကြမ်း ဖက်အဖွဲ့အစည်း သတ်မှတ်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ ပြောနေ တာတော့ကြာလှပြီပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဆွေးနွေးတာက လည်းဆွေးနွေးနေတာပဲ။ AA အဖွဲ့ ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဒီလိုတရားခံပြေးလို့ ကြေညာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ AA အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ရှိလို့ မဗာပြည်ထဲမှာ လာရောက်ဆွေးနွေးတာတွေ နှောင့်နှေးနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်ရဲ့ကူညီမှုနဲ့ တရုတ်ပြည်ထဲမှာ ဆွေးနွေးမယ် ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုလို AA အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားခံပြေးအဖြစ် ကြေညာ တာကတော့ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ ကျန်တာထက်စာလို့ရှိရင်တော့ နိုင်ငံရေးအရ ထိုးနှက်ချင်လွန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ ဗမာပြည်ထဲမှာလာပြီးတော့ ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပိုခက်သွားမှာပေါ့ဗျာ"
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခကလည်း တပ်မတော်နဲ့ အစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမှာ ပါဝင်စေချင်ကြောင်း ပြောဆိုနေပေမယ့် အခုလုပ်ရပ်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပျက်ပြားစေနိုင်ကြောင်း၊ တရားရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ဥပဒေစိုးမိုးတဲ့နေရာတွေကို သွားလို့မရတော့ကြောင်း RFA ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။
နိုင်ငံသမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေး ကတော့ အခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်။
“ဒီအပေါ်မှာတော့ ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့ ရှင်းစရာမရှိ ဘူးပေါ့နော်။ အသေးစိတ်ရှင်းဖို့တော့မရှိဘူး။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ကတော့ သူတို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ခံမယ် ဘာမှ မဖြစ်စေအောင် ဆွေးနွေးပွဲလာတဲ့အခါမှာ။ လာရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမှာပါ။ အဲအပေါ်မှာလည်း လုံခြုံရေးအရ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ယူတယ်။ မှဲ့တစ်ပေါက်မစွန်းစေရဘူးလို့ ကျွန်တော် တို့ပြောပြီးသား”
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တရားခံပြေးအဖြစ် အမှုဖွင့်ထားတဲ့ကိစ္စဟာ သက်ဆိုင်ရာက ဥပဒေအတိုင်းပဲ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဦးဇော်ဌေး ကပြောပါတယ်။
ဒီသုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖဲ့ွက ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က အခုလိုပြောပါတယ်။
“တရားစွဲတာက နောက်တောင်ကျနေပြီလို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူး တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ဝင်ပြီးတော့မှ နယ်စပ် မှာတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုကို အကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ ရဲစခန်းတွေ စစ်ရေးစစ်ရာနဲ့ မပတ်သက်တဲ့စခန်းတွေကို တိုက်ခဲ့ကတည်းက တရားစွဲတင်တယ်လို့ ကျွန်တော့အမြင်ကိုပြောပြီး သားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်တဲ့ ဒါလည်းတပ်ရဲ့ သဘောထားတစ်ခုနဲ့ လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို NRPC ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့ လုပ်နေတာ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အစိုးရရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပဲ ကိုယ့်ရဲ့ရပ်တည်ချက် ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ခုနကပြောတဲ့ NRPC ရဲ့ သမ္မတရုံး ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်”
တရားခံပြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ စွဲဆိုထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ တရားရုံးက မင်နီသက်သေအချို့ကို စစ်ဆေးပြီးမှ တရားခံပြေးအဖြစ် ဆက်လက်ကြေညာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့က ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ နယ်ခြားစောင့်ရဲစခန်း ၄ ခုကို AA အဖွဲ့က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း AA အဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေနဲ့ နယ်မြေရဲစခန်းတွေမှာ အသီးသီးအမှုဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်။
AA is the one who disturbed the peace of Chin state and Rakhine state. If they did not begin the killings, there will be no war in those areas. They created the enemy among the people who live peacefully and harmoniously for many decades. Now you are saying it will affect the peace agreement. Very funny!!
သ ဘ မ
ခုလို အရေးယူတာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လုံး၀ ( လုံးဝ) မထိခိုက်ပါ။ AA ဆိုတာ ရခိုင် လူမျိုးကို ခုတုံးလုပ်တဲ့ ဒမြ ဂိုဏ်းအကြီးစားပါ။
Jul 13, 2019 03:41 AM